आजको राशिफल : २०७७ असोज १२ गते सोमबार
Homeराशिफलआजको राशिफल : २०७७ असोज १२ गते सोमबार
September 28, 2020 admin राशिफल 9996
कार्य क्षे’त्रमा लगा’ईएको गलन सिलताको कदर हुने समय रहेकोछ । मान्य’जनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य समस्या उत्पन्न गर्न सक्नेछन । मध्यान पश्चात भने नयाँ’कार्यको थालनी तथा आम्दानीको क्षेत्र उत्तम रहनेछ । अध्यन अध्यापनमा समय उत्तम रहनेछ । मनोर’ञ्जनका क्षेत्रमा सम’य ब्यतित रहनेछ ।
गैर ब्यक्तिको संगत’ले अपज’सको सामना गर्नु पर्ला । यात्रा कारक समय रहेको छ । पारी’वारिक झोर झमेलाको सामना गर्नुपर्ने सम्भाबना रहेको छ । मध्या’न पश्चात भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा मन प्रशन्न रहनेछ । सा’माजिक कार्यमा जुट्ने समय रहेकोछ । मानसम्मान प्राप्तीको योग रहेकोछ । स’वारि सा’धनको प्रयोमा ध्यान पूर्याउनु होला ।
मीथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह)
ईष्ट मित्र बिच सामान्य बा’दबिवादको योग रहेको छ । स्वास्थ सम्बन्धि सम’स्याले सताउन सक्नेछ । मध्यान पश्चात मित्र तथा दाजु भाई बिचको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । मनोर’ञ्जन मुलक यात्राको सम्भा’बना रहेकोछ । माल सामान हराउन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । अपरीचित ब्यत्ति’हरुको बिश्वा’समा नपरेकै बेश रहनेछ ।
क’र्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो)
मनोबि’लासिताका सा’मान खरीद योग रहेको छ । कार्य क्षेत्रको लाप’रबाहिले सामान्य झन्झट आईपर्ला । मध्यान पश्चात खानपानमा बिशेष ध्यान दिनु होला । खुट्टा तान्ने ब्यक्ति बाट बच्नु पर्ने समय छ । मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । सामा’न्य बादबिवा’दको झमेलामा फसिने सम्भाबना रहेकोछ ।
नजि’कका ब्यक्ति बाट धोका मिल्न सक्छ सजग रहनु होला । यात्रामा सामान्य कठिनाई आईपर्न सक्छ । तपाईको कार्यको फाईदा मित्रजनले प्राप्त गर्नेछन । मध्या’न पश्चात जिवन’साथीको सहयोगद्वारा अप्रत्यासित लाभको अवसर मिल्नेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । ब्या’पार ब्यव’सायका निम्ती उत्तम समय रहेकोछ ।
सामान्य चुनौ’ति पस्चात आम्दानि राम्रो रहनेछ । अरुको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्ने छ । सामान्य अप्रिय खबरले मानसिक चि’न्ता ब्यहोर्नु पर्ला । मध्यान पश्चात जिद्दी स्व’भावको कारण प्रतिश्पर्धामा पराजयको सामना गर्नुपर्नेछ । स्वास्थको गडबढिका कारण सामान्य खर्चको सम्भा’बना रहेकोछ । कार्य क्षेत्रमा अरुको द’बाबको मह’सुस हुनेछ ।
सामा’जिक कार्यमा आफु अ’ग्रसर रहेपनि त्यसको श्रेय भने अरु लाई मिल्नाले सा’मान्य खिन्नता बोध हुनेछ । मध्यान पश्चात बौधिक ब्यक्तिहरुका बिचमा आफु कमजोर भएको महसुस हुनेछ । अध्यन अध्यापनका निम्ती अ’धिक श्रम ब्यतित गर्नुपर्ने समय रहेकोछ । बौधिक ब्य’त्तित्व हरुको साथ सह’योगमा आर्थिक क्षेत्र सवल बन्ने सम्भाबना रहेकोछ ।
बृश्चि’क (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु)
मित्र जनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्ने योग रहेको छ । साझेदारी काम’को आम्दानि भने उत्तम रहनेछ । मध्यान पश्चात आम्दानिको क्षेत्र सबल रहेता पनि कार्यको क्षेत्रमा भने त्यति मन लाग्ने छैन । भौति’क श्रोत’साधनका प्रयोगमा समय ब्यतित रहला । कार्यक्षेत्रको त्रुटिका कारण आत्म’सम्मानमा ठेस पुग्न सक्ने सम्भाबना रहेकोछ ।
स’ञ्चित रकम खर्चहुने योग रहेको छ । अरुको द’बाबको कारण मा’नशिक समस्या आई पर्ने छन । पठनपाठनमा भने समय राम्रो रहेको छ । मध्या’न पश्चात नजिकका मित्रजनहरु बिचको सम्बन्ध टाढिन सक्ला । अधिक आत्म’बिश्वास तथा घमडका कारण मित्र’तथा दाजुभाई सगँको सम्ब’न्धमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
नयाँ कार्य थाल’निका निम्ति आट र साहशको कमि आउनेछ । भौतिक स्रोत साध’नको प्रयोगमा समय ब्यतित हुने योग रहेको छ । मध्यान पश्चात ब्यक्तिव बि’काशमा जुट्ने समय रहेको छ । कुलकुटुम्ब हरुको साथ सहयोग राम्रो प्राप्त हुनेछ । खानपा’नको गडबढिका कारण स्वास्थ’मा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
बिश्वा’सिलो ब्य’क्ति हरुबाट धोका हुन सक्छ । शत्रुपक्ष मजबुत रहनाले कार्य क्षेत्रमा बिशेष सजग रहनु पर्ला । म’३ध्यान पश्चात मान प्रतिष्ठामा बृद्धि हुनेयोग परेकोछ । दाम्पत्य शुखमा कमि आउनेछ । अधुराकार्य सम्पादनका निम्ती समय उत्तम रहनेछ । शारीरिक आल’स्यताका कारण कार्य’क्षेत्रमा अपज’सको सम्भा’बना रहनेछ ।
मिन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि)
मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य स’म्पादनमा मदत पूग्नेछ । आफ्नो चार्तु’यताले कार्य सम्पादन गर्दा सबैको चर्चा को बिषय भईन सकिनेछ । मध्यान पश्चात को’ध्रको कारण मानसी’क चिन्ता रहन सक्छ । तात्कालिन आर्थीक अभा’बको सामना गर्नुपर्नेछ । नजीकका ब्यत्ति’त्वहरुबाट धोका हुनाले कार्य सम्पा’दनमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
गाडीले स्कुटरलाई ठक्कर दिदा एकै परिवारका ३ जनाको निधन
लोकप्रिय भारतिय अभिनेता रणवीर कपुरको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस्
September 30, 2020 admin राशिफल 8620
आज मिति २०७८ साल बैशाख २० गते सोमबारको राशिफल हे’र्नुहोस्
May 3, 2021 admin राशिफल 4914
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) नयाँ कार्य थाल’निको योग रहेकोछ । भुमि तथा वाहन सम्बन्धी समस्याले सताउनेछ । सामान्य कार्य सम्पाद’नमा अधिक श्रम खर्चनु पर्नेछ साथै सा’मान्य अपजस खेप्नु
आज मिति २०७७ माघ १७ गते शनिबारको राशिफल हेर्नुहोस्
January 30, 2021 admin राशिफल 4856
मेष धन ख&र्चको योग छ । स्वास्थ्य समस्या बल्झि’एला । माया प्रेममा सुमधुरता । राम्रो सह’यात्रीको मिलन हुने सम्भावना छ । बाहिर खानु अघि विचार गर्नुहोला । शैक्षिक क्षेत्र मध्यम रहला । बृष अभिभावकको आ’शीर्वाद
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (243681)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (231238)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (230968)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (229206)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (228221)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (228092)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (227602)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (197252)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (195566)